Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ndị ọbịa US: Hawaii mara mma, COVID ma ọ bụ enweghị COVID!
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
81% nke ndị bịarutere US na-akwụ ụgwọ njem Hawaii dị ka ọmarịcha na ntuli aka afọ ojuju ndị ọbịa COVID-19.
N'ime Ọktọba 2021, mmemme Safe Travels nke Hawaii kwere ka ọtụtụ ndị njem na-esi na steeti pụta ka ha ghara ịpụnarị onwe ha ụbọchị iri ma ọ bụrụ na agbanyere ha ọgwụ mgbochi zuru oke na US ma ọ bụ nwee nsonaazụ COVID-10 NAAT na-adịghị mma sitere na ntụkwasị obi. Onye Mmekọ Nnwale.
Ndị ọbịa ugboro ugboro nwere ike ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke yana ohere ịgba ọgwụ mgbochi ahụ na-abawanye ka afọ.
Ndị njem na-eto eto, ndị e debere dị ka ndị na-erubeghị afọ 35, yikarịrị ka ọ ga-eche na njem ha karịrị ihe ha tụrụ anya ya.
Mgbe a jụrụ ajụjụ gbasara ahụmịhe ha, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile (98%) ndị zaghachirinụ gosiri enyi na enyi nke ndị ọrụ Hawaii na ndị bi na ya dị ka “Mara nke ọma” ma ọ bụ “Karịrị Nkezi.”
The Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Hawaii (HTA) weputara nsonaazụ nyocha nsochi pụrụ iche kachasị ọhụrụ, nke nyochara ndị ọbịa si na kọntinent US ndị gara Hawaii site na Ọktọba 1 ruo Ọktoba 5, 2021, iji tụọ ahụmịhe ha na mmemme Safe Travels Hawaii na afọ ojuju njem niile. Nke a bụ nyocha ndị ọbịa nke anọ na nke ikpeazụ n'usoro malitere na njedebe nke afọ gara aga.
Ọtụtụ ndị ọbịa (81%) gosiri ha Hawaii njem dị ka "Magburu onwe;" afọ ojuju ọbịa anọgidewo na-akwụsi ike n'ime afọ ahụ site n'itinye ntakịrị ntakịrị na nyocha mbụ e mere na June 2021. Mgbe a jụrụ ndị zara ajụjụ bụ ndị gosiri njem ha dị ka "N'elu Nkezi" ma ọ bụ obere ihe ọ ga-adị mkpa ịgbanwe banyere njem ha na iji gosi njem ha dị ka “Mara nke ọma,” ndị ọbịa zoro aka na mmachi COVID pere mpe (32%) sochiri ịmanye iwu COVID (12%).
N'ime ndị ọbịa ugboro ugboro bụ ndị gakwara na mbụ Hawaii na February 2020 ma ọ bụ tupu mgbe ahụ, nke bụ tupu steeti ahụ emejuputa iwu mgbochi COVID, pasenti 38 gosiri na njem ha ugbu a enwechaghị afọ ojuju. Isi ihe kpatara nke a kpọtụrụ aha maka nke a bụ ọtụtụ mmachi COVID (65%) yana oke ma ọ bụ ikike nke ụlọ nri, ebe nkiri na ebe obibi. Agbanyeghị, pasent 90 nke ndị ọbịa kwuru na ha nwere ike ime ihe niile ma ọ bụ ọtụtụ ihe omume ha zubere.
Nnyocha ahụ gosikwara na ndị njem na-eto eto, ndị e kewapụrụ dị ka ndị na-erubeghị afọ 35, yikarịrị ka hà ga-eche na njem ha karịrị ihe ha tụrụ anya ya.
Mgbe ajụrụ ya gbasara ahụmịhe ha, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile (98%) ndị zara ajụjụ gosipụtara enyi na enyi nke ndị ọrụ na ndị bi na ya dị ka “Mara nke ọma” ma ọ bụ “Karịrị Nkezi.” Ọtụtụ ndị ọbịa gosikwara ụlọ oriri na ọṅụṅụ ha (ma ọ bụ ebe obibi) dị ka ezigbo (82%).
N'ọnwa Ọktoba 2021, HawaiiMmemme Safe Njem kwere ka ọtụtụ ndị njem na-esi na steeti abịa ka ha gafere mgbochi nke ụbọchị iri ma ọ bụrụ na agbanyere ha ọgwụ mgbochi zuru oke na US ma ọ bụ nsonaazụ COVID-10 NAAT na-adịghị mma sitere na Onye Mmekọ Nlebaanya tụkwasịrị obi. Ọtụtụ ndị ọbịa (19%) kwuru na ha enweghị nsogbu na webụsaịtị ma ọ bụ usoro Safe Travels.
Tupu ha erute na Hawaii, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa niile (98%) maara na iwu gọọmentị dị, dị ka iyi ihe nkpuchi n'ụfọdụ, ịpụpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ịzenarị izukọta na nnukwu otu.
Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ (70%) nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha ga-aga Hawaii ọzọ n'agbanyeghị ihe a chọrọ tupu nleta. N'ime pasent 30 fọdụrụnụ nke ndị zaghachirinụ, pasent 18 kwuru na ha ga-aga ọzọ mgbe ọrịa ahụ kwụsịrị na ọtụtụ ma ọ bụ iwu niile COVID dị ka azụmahịa ma ọ bụ mmachi mmachi, pasent 8 kwuru na ha enweghị atụmatụ ịlaghachi na Hawaii, yana Pasent 4 kwuru na ha ga-eleta ọzọ mgbe a na-enweghị nyocha nnwale COVID tupu ha aga.